App က ဒီလိုဖြစ်နေတာ... — MYSTERY ZILLION
App က ဒီလိုဖြစ်နေတာ...
June 2012 edited June 2012 in iPhone
iphone မှာ အချို့app ရမ်း လိုက် ရင် ပြန်ပြန် ပိတ်သွားလို့ ခင်ဗျ။ အဲ ဆော်ဝဲကို ပြန်ဖြုတ်ပြီး အစ ကနေ ပြန် သွင်းကြည့်တယ် ခင်ဗျ။ အဲဒါလဲ ဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျ... M...Z မှ ညီအစ်ကိုများ ကူညီပေးကြပါအုံး....
are you using jailbreak app ? If the app is using jailbreak, it's not stable.
If you bought or download from app store, you should send feedback to developer.
Check the crash log on the device ,